ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ စုပေါင်းအလှူ ၂၇၈ သိန်း ၈သောင်း ၅ထောင် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ လှူဒါန်း | MoeMaKa Burmese News & Media
November 29, 2012မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမြန်မာမိသားစုများ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ စုပေါင်းလှူဒါန်းသည့် အလှူငွေ ၂၇၈ သန်း ၈ သောင်း ၅ ထောင်ကို ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပေးအပ်ခဲ့ရာ ဦးတင်ဦးက လက်ခံခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်မှတ်တမ်းလွှာ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၉ နေ့က မြန်မာပြည်၏ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲက အစပြုပြီး အလှူခံရရှိငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သောင်း ၃ ထောင်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ရည်ရွယ် လှူဒါန်းရန် အဆင့်ဆင့် စီစဉ်ခဲ့ရာ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဆိုင်ရာရုံးခန်းတွင် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာဒေသက စီစဉ်သူတဦးဖြစ်သော ကိုတိုးလွင်က ပြောကြားလိုက်သည်။
(Photo – file picture, Suu seen at the memorail building of Daw Khin Kyi in Rangoon)
San Francisco Burmese Community and Families donated 3,3000.00 US$ towards Suu’s Daw Khin Kyi Foundation in Rangoon
MoeMaKa, November, 28th , 2012
Funds raised and collected by San Francisco Burmese Community Families for Daw Khin Kyi Foundation was handed over to U Tin Oo in Rangoon yesterday and the acknowledgement letter was signed by U Tin Oo in return. Total amount of charity raised was found equal to over 27.8 million Kyats in Burmese currency.
Since 29th September, at the event of “Suu-SF”, Burmese Community Meeting with Aung San Suu Kyi in San Francisco, friends and families of San Francisco Bay Area Burmese community had started raising funds for Daw Khin Kyi Foundation founded by Aung San Suu Kyi for education charity works in Burma. US$ 33,000.00 has been collected and finally on 27th November, the fund has transferred to responsible hand of the foundation, Ko Toe Lwin, one of the organizers for the fund raising event told MoeMaKa.
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:သတင်းပဒေသာ, ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ	One Response to ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ စုပေါင်းအလှူ ၂၇၈ သိန်း ၈သောင်း ၅ထောင် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ လှူဒါန်း San Lin on November 29, 2012 at 9:29 am I think it is 27.88 million kyats in Burmese currency.
ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - မီးလင်းကုန်ပြီ	မောင်တူး - သက်ရှိပန်းချီ - အပိုင်း (၁၇)	ဆောင်းလူ - အပြာကား	သားကြီး မောင်ဇေယျ - ဥပဒေစစ်မြေပြင်က ခွပ်ဒေါင်းများ	HTC One M9 မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	တူမောင်ညို - သင်္ကြန်အမြောက်သံမဟုတ်မှသာ အာဏာရအုပ်စုက လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားမှာပါ	မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး သရုပ်ဆောင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - ကြိုဆိုနေသူတွေ	စာရေးဆရာ ဝင်းငြိမ်း ၏ “ နန်းကျဘုရင် ” ဘာသာပြန်စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်က မြန်မာရဟန်းတော်၏ Win-Win သီအိုရီ	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများခိုင်မာကျော်ဇော - တခါက လိုင်ဇာ
စာပဒေသာ ကောက်စာများမေငြိမ်း - ကျမ နဲ့ မြန်မာစာ